Final bosses တှကေိုဘယျလိုမှ အနိုငျယူနိုငျခဲ့ခွငျးမရှိခဲ့တဲ့ (၂) နှဈဆကျကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ (OMEGA League Grand Final Analysis) – Gaming Noodle
ပှဲကို ပွနျပွီးသုံးသပျရမှာက Secret ဘယျလောကျထိကောငျးကွောငျး၊ ဘယျသူမှ ဘယျလိုမှ ယှဥျမဆော့နိုငျလောကျတဲ့ အထိ အကှကျစကွေ့ောငျး၊ Puppeyဟာ DOTA သမိုငျးတဈလြောကျ ခြှငျးခကျြမရှိ အကောငျးဆုံး Drafter တဈယောကျသာမက Captainကောငျး Leaderကောငျးဖွဈကွောငျး ဒါတှပေဲ ထပျနပေါလိမျ့မယျ။ အဲ့တော့ပငျြးစရာကောငျးနပေါလိမျ့မယျ။
နောကျပွီး ဒီနှဈရဲ့ မရိုးတဲ့ ပုံပွငျဟောငျးလေးအတိုငျး Team Secret အတှကျ 3:0 ဇာတျလမျးလေး နောကျတဈပုဒျပါပဲ။ အဲ့တော့ ဒီနှဈသငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ တဈခွား ထှရောလေးပါးတှကေို နညျးနညျးပိုပွီး အသားပေးပွောခငျြပါတယျ။
Secret နဲ့ ပတျသကျပွီး အခကျြအလကျတှပေါ ပွောမှာဖွဈတော့ အရငျဆုံး OG တှေ မလုံလောကျသေးတဲ့အကွောငျး OGတှေ OG မပီသတဲ့ အကွောငျးကနေ စလိုကျရအောငျ။
ဒါပမေယျ့ OGတှေ မလုံလောကျသေးဘူး ဆိုတာက မကောငျးတာလား ဆိုတော့လညျး မဟုတျပွနျဘူးရယျ။ OGရဲ့ map movement နဲ့ map control တှကေ Secret ထကျ နညျးနညျးလေးမှကို မနိမျ့ပါဘူး။ တဈခွားအသငျးက ကစားသမားတှလေို (ဝှီးလို :3) ရညျရှယျခကျြမရှိတဲ့ သခွေငျးတှေ map awareness မရှိတဲ့ လှုပျရှားမှုတှေ တျောတျောလေးမွငျရခဲပါတယျ။ အခုခြိနျထိလညျး ကွိုကျတဲ့အသငျးလာ OG ကရယျဒီပါပဲ။ (Team Secret ကလှဲလို့ :v)
အရငျဆုံး TI 8, TI9OG အပွီး နောကျဆုံး Sumail အလှနျကာလကို တဈခကျြလောကျကွညျ့ရငျ Midone မှာ carry စိတျခံ မရှိသေး ready မဖွဈသေးပါဘူး။ Sven ရော Faceless Void ရော Troll Warlord ရောကို ဘာ Basic items တဈကှကျမှ မပါဘဲ ဆော့တာကို ကွညျ့ရတာ ဘယျလိုမှ အဆငျပွမေနပေါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သငျယူရငျ လလေ့ာရငျ အခြိနျယူရငျ ပိုကောငျး ပို carry နိုငျမယျ့ Midone ကို တှရေ့မှာပါ။ လောလောဆယျ ဒါက ပွသနာမဟုတျဘူးလို့ပဲ မွငျပါသေးတယျ။ Midoneဟာ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံးတှထေဲက တဈယောကျပါ။
OG မှာလိုနတေဲ့ တကယျ့နရောအမှနျက Position4ပါ။ Jerax အနားယူပွီးနောကျ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ Pos4တှကေို စီလိုကျရငျ Gh, Cr1t, Yapzor, fy တို့ပါ။ အကုနျလုံးက playermaker role ကို အကောငျးဆုံး ဆော့နိုငျကွပွီး Cr1tကတော့ defensive စိတျအခံနဲ့ အခြိနျကောငျး အရမျးစောငျ့ကာ ဆော့တာ နညျးနညျးလေးပါတယျ။
အခုပွောခငျြတဲ့အကွောငျးအရာက Saksa ပါပဲ။ ဆော့ပုံလေးတာက Cr1t အဖခေျေါရလောကျအောငျ လေးပါတယျ။ Playmaker ကောငျး တဈယောကျလား ဆိုတော့လညျး မဟုတျပွနျပါဘူး။ Heroes Pool ကယျြလား ဆိုတော့လညျး မကယျြပါဘူး။ Signature Heroes တှေ ကောငျးကောငျးရှိလား ဆိုတော့လညျး မယျမယျရရ ခပြွစရာ မရှိပါဘူး။ OG fans စဈစဈတှဆေို တျောတျော အသညျးပေါကျလောကျစရာက OG က Tiny pick ရငျ သခြောတာက Topson ဆော့မယျဆိုတာပါပဲ။ Jerax ကို လှမျးဖို့ အကောငျးဆုံးအခြိနျ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
ဒါပမေဲ့ OG လညျးမရ ရတဲ့ထဲက အကောငျးဆုံးကိုချေါထားတာပါ။ စြေးကှကျထဲမှာလညျး တကယျကောငျးသေးတဲ့ pos4ဆိုလို့ Europe မှာ Taiga, Zayac တို့လောကျပဲ ရှိပါတော့တယျ(အကုနျလုံးက အသငျးကိုယျစီနဲ့) OG ဟာ TI မှာ အသဈဆုံးသော အဆနျးဆုံးသော အလှဆုံးသောအရာကို တီထှငျခပြွခဲ့တာပါ။
အခု OG ရဲ့ Secret ကို draft နိမျ့ခွငျး၊ heroes တှကေို role flexibility လုပျရခကျနခွေငျး၊ Topson အတျောလေး ဆော့ရခကျနခွေငျးဟာ Saksaနဲ့ ရာခိုငျနှုနျး တျောတျောမြားမြား ဆိုငျပါတယျ။ အခုဒီ အခွအေနနေဲ့ Team Secret ကို တဈကမ်ဘာလုံးမှာ နိုငျအောငျဆော့နိုငျတဲ့အသငျး လကျငါးခြောငျး မပွညျ့ပါဘူး။ အဲ့ထဲမှာ OG နဲ့ Nigma က ထိပျဆုံးက ပါနမှောပါ။ OG ကလညျး Saksa နရော ၊ Nigma ကလညျး W33 နရော အဖွရှောတှရေ့ငျပေါ့လေ။ (လူလဲခငျြးမဟုတျတဲ့ အဖွထေုတျနိုငျကွမလား???) သခြောတာတော့ Notail တဈယောကျ Ana လေးနဲ့ Jerax ကွီးကို လှမျးနမေယျဆိုတာ သူ့မကျြနှာမွငျလိုကျတဲ့သူတှေ သိကွမှာပါ။
ကဲ Team Secret…
နညျးနညျးလောကျ အသကျ၀၀ရှူလိုကျပွီးမှ ဆကျဖတျလိုကျပါ မိတျဆှေ၊ အခု သမိုငျးတဈလြောကျ အကောငျးဆုံးရလဒျ တှနေဲ့ လှမျးမိုးထားတဲ့ အသငျး အကွောငျး ဖတျရမှာပါ။
Covid သာ မနှောကျခဲ့ရငျလို့ တှေးကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။ Secretဟာ ဘာလဲ ဘယျလဲပေါ့။ Puppeyကွီး လေးကွိမျမွောကျ TI Grand Finals ကိုသာ ဆော့ရရငျ ရှုံးရှုံး နိုငျနိုငျဗြာ အနညျးဆုံးတော့ Godfather ကွီးရဲ့ insight အကဆြုံး အတှေးအချေါတှေ၊ တဈသငျးလုံးကို ဦးဆောငျပုံတှေ သကျရှိထငျရှားရှိတုနျးလေး မွငျနိုငျတာပေါ့။
ဘျောဒါအဈကိုတဈယောကျကပွောလာတော့မှ ကြှနျတျောလညျး True Sightမှာ Puppey ကွီးကို အမွငျခငျြဆုံးပဲ ဆိုတာ သတိဝငျလာတယျ။ ဒါပမေဲ့ Team Secretဆိုတာဘယျတုနျးက TIနဲ့ လမိုငျးကပျခဲ့လို့လဲ။ ဘယျလောကျကောငျးကောငျး အမွဲတမျး အခငျဆုံးဆိုတဲ့ သူငယျခငျြးကွီးနဲ့တှရေ့ငျ ပွုတျနကွေပဲ မဟုတျလား။ ထားလိုကျပါတော့ ဒါတှကေို။
ပစ်စုပနျကိုပွနျသှားလိုကျကွရအောငျ။ Ceb ရဲ့ Grand finals မတိုငျခငျ tweet က time to play final boss again ပါ။ Secret ဟာ နောကျဆုံးဆရာကွီးတှပေါ။ ဒီ grand finals ရဲ့ 3:0 မတိုငျခငျ ၆ ပှဲဆကျတိုကျ ဖိုငျနယျတှမှော 3:0 ယူလာတဲ့ အသငျးပါ။ သမိုငျးတဈလြောကျ ဘယျသူမှမရှိသေးပါဘူး။ OG ကတော့ Sumail ရှိတုနျးက ping မြားနတေဲ့ Midone နဲ့တဈခါ၊ အခု Ceb ပွနျလာတဲ့တဈခါ နှဈခါလုံး အရေးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။
OMEGA League ရဲ့ upper bracket final ပှဲအပွီး Panel မှာ BSJ က Secret ဟာ ပငျြးဖို့ကောငျးလောကျအောငျ ကောငျးလှနျးနပေါတယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ အဓိကကတော့ laning stage အပွီးလောကျဆိုရငျကို ပှဲက အဖွထှေကျ နလေို့ပါပဲ။ Puppey draft တှကေလညျး နညျးနညျးမှကို မနိမျ့ခဲ့ဘူးလေ။ ဘယျသူမှ ယှဥျလို့မရတဲ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲရလှယျပွီး အကောငျပေါငျးစုံ ဆော့နနေိုငျတဲ့ အခု အသငျးသားတှကေို ရထားတာလညျး တဈကွောငျးပေါ့။
နောကျပွီးဆော့တာကလညျး တကယျကောငျးတဲ့ discipline တှနေဲ့ အပိုအလိုမရှိ ဆော့နိုငျနတောပါ။ Matu ဟာ hard carry ကောငျးကောငျး တဈယောကျ ဖွဈတယျဆိုတာ big game player ဖွဈတယျဆိုတာကို အကွိမျကွိမျ သကျသေ ပွနပေါတယျ။ တဈခွားသူတှေ ဘယျလောကျကောငျးကွောငျး Team Secret ဘယျလိုလုပျကွောငျးကတော့ ဆကျမပွောတော့ပါဘူး။ ဟိုးအပျေါမှာ ပွောခဲ့သလိုပဲ ဖတျရတာ ပငျြးတယျကှာပဲ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ Grand finals အပွီး Yapzor + Zai interview မှာလညျး Zai က finals တှတေိုငျးက 3:0 တှဆေိုပမေယျ့ အတတျနိုငျဆုံး စိတျဝငျစရာကောငျးအောငျ ဆော့နပေါတယျတဲ့။
ဘယျလောကျပငျြးဖို့ကောငျးတဲ့စကားမြိုးလဲ။ ဪ … ဒါနဲ့ Team Secret ရဲ့ 2020 တဈလြောကျ ဆော့ကစားထားပွီး အနိုငျရတဲ့ Winrate က 81.97% တဲ့ဗြို့။
ကဲ 3-0 နဲ့ Game ပှဲသုံးပှဲဘကျလှညျ့လိုကျရအောငျ။
Coin toss တိုငျးဟာ OG နိုငျပွီး first pick ယူပါတယျ။ သုံးပှဲလုံး first pick, dire ပါ။
Draft ကနေ စရရငျ OG ဟာ အနညျးဆုံးတော့ အိမျစာလုပျလာတယျ ပွငျဆငျလာတယျဆို တာကို တှရေ့မှာပါ။
Magnus, Tiny, Phoenix, Clockwerk တို့ကို ban list တငျအပွီးမှာ IO first pick နဲ့ စထှကျလာတဲ့ OG ကို အမြားကွီး စဥျးစား မနတေော့ဘဲ Ancient Apparition ကွီး Puppey ထုတျလိုကျပါတယျ။ Dark Willow ကတော့ ထငျမှတျမထားတဲ့ တဈပှဲတိုးအကှကျနဲ့ Saksa အတှကျ အဆငျပွတေဲ့ကောငျပါ။ ဒါပမေဲ့ Team Secret ရဲ့ second pick ဟာ Faceless Void ပါ။
ဒါနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတှေ အတှကျ ရယျစရာလေး ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။ Nigma ကို 2:0 နဲ့ နိုငျအပွီးမှာ Midone နဲ့ အငျတာဗြူးပါတယျ။ အဲ့အခြိနျမှာ Lacoste က panel ကနေ ဟေး, Midone မငျးက တှဈတာမှာ IceFrog ဟိုဟာက broken ဖွဈတယျ၊ ဒီဟာက broken ဖွဈတယျနဲ့ အမွဲ tweet တာ ငါအရမျးကွိုကျတယျ။ အခုနေ tweet ရမယျဆို မငျး ဘာ tweet မလဲ မေးတော့ Midone က IceFrog ဆိုပွီး ငါ tweet မယျ “မငျးရဲ့ f**king Faceless Void က ဆိုပွီး အရငျဆုံးစမယျ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲ့ကောငျက အဆငျပွမေနဘေူး၊ အရှငျးဆုံး ပွောရရငျ သူ့ရဲ့ ပထမ spell က အခွခေံအားဖွငျ့တော့ အဲ့တာ Weaver ရဲ့ ultimate ကွီး၊ သူ အဲ့တာကိုသုံးတဲ့ အကွိမျတိုငျး ငါဒေါသထှကျရတယျ၊ ပွီးတော့ bash (time lock), ငါထငျတယျ အဲ့တာကလညျး တကယျအဆငျမပွဘေူး။
အဲ့တာက bash ၀ငျသှားတဲ့ အကွိမျတိုငျးက double damage လိုပဲ၊ ငါကတော့ IceFrog ဘာတှေ တှေးနလေဲ မသိဘူး၊ ငါပွောနိုငျတာကတော့ သူရဲ့ ဦးနှောကျက ပွသနာတဈခု ဆိုတာပဲ ၊ Time Dilation ကလညျး နောကျထပျ အဆငျပွတေဲ့ spell တဈခုမဟုတျပွနျဘူး။” ဆိုပွီး ဒေါနဲ့မောနဲ့ ပွနျဖွခေဲ့ပါတယျ။ အခုတော့ Midone တဈယောကျ သူမုနျးနတေဲ့ကောငျနဲ့ နဖူးတှေ့၊ ဒူးတှေ့ စတှပေ့ါပွီ။
Second pick phase မှာ Team Secret က Sand King ထှကျလာပွီးနောကျ SK, AA ဆိုတဲ့ backline ကို ဝငျရှငျးဖို့ Vision အားသာခကျြကို AOE silence ရောပါတဲ့ NS ကို ထပျထုတျလာတာ reasonal pick ဆိုပမေယျ့ ထုံးစံအတိုငျး Playmaker ပြောကျနသေေးပွီး hero တှေ အကုနျ pick အပွီးမှာတော့ pugna ဟာ Topson ရဲ့ mid ဖွဈနတေဲ့အတှကျ ပွောရရငျ ထုံးစံအတိုငျး Team Secret ရဲ့ pick power ဟာ mid game နဲ့ late game တျောတျောလေး အားကောငျးနပွေီး အစောပိုငျး objectives တှေ အတှကျသာ စိုးရိမျစရာ ရှိတာပါ။
ပှဲထဲ ရောကျတော့လညျး laning phase အစမှာတညျးက Secret တှေ ရှယျလုပျပါတယျ။ ဘယျလမျးမှ pressure မရှိပါဘူး။ lane တှေ ဆော့တာကလညျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ နားလညျမှု အပွညျ့နဲ့ heroes kills တှပေါ အရယူနိုငျတာပါ။ ဒါပမေဲ့ OG လညျး laning မှာ ဘာ pressure မှ အဲ့လောကျမရှိခဲ့ပါဘူး။ Laning အပွီးမှာတော့ Great Cleave နဲ့ free farm ရနတေဲ့ Sven က OG ရဲ့ networth တှေ တျောတျောလေး ခေါငျးထောငျနရေခွငျး အကွောငျးအရငျးပါပဲ။
Midone ရဲ့ itemization တှကေလညျး တျောတျောလေး ပပေါတယျ။ အထကျမှာ ပွောတဲ့အတိုငျး သုံးပှဲလုံး Bracer၊ Wraith band တဈခုမှ ထညျ့မသှားပါဘူး။ Sven ကိုလညျး Phase Boots, Magic Wands, Mask of Madness, Echo Sabre နဲ့ Black King Bar ရယျပါ။ over farm ဖွဈနပွေီး 20 minutes over 13000 ဆိုတဲ့ networth ကွောငျ့ရယျ IO ကွောငျ့ရယျ အသကျရှူခြောငျနတောပါ။ တဈဖကျက crowd control တှေ တအားမြားတော့ BKB နဲ့ God’s strength မရှိတဲ့ အခြိနျတိုငျးက ငရဲပါပဲ။ BKB 5sec လောကျ အရောကျဆို တျောတျောလေး ဒုက်ခရောကျနခေဲ့တာပါ။
တဈဖကျမှာလညျး Matu က ဒီ့ထကျဆိုးတဲ့ အခွအေနနေဲ့ပါ။ Mid Game လောကျထိ Midone ထကျ အမှားပိုမြားပွီး farm ရတာလညျး ပိုကွာပါတယျ။ Mask of Madness အပွီးမှာလညျး နောကျထပျ farm တာ Black King Bar ပါ။ အသငျးက battle heroes တှေ မြားတော့ သူကိုယျလညျး space ပွနျခြုံ့ပွီး တျောတျောလေး Battle တှကေို follow လုပျပါတယျ။ OG တှေ ကလညျး Roshan battles တှကေို အကောငျးဆုံးဆိုငျပွီး Map ကို အကောငျးဆုံး control လုပျထားတာပါ။
ပှဲရဲ့ Draft ကတော့ ကွာကွာဆော့လလေေ Secret က ကွိုကျလလေဆေိုတော့ points တှပေဲ ဆှဲထုတျပွပါတော့မယျ။ OG ရဲ့ မဟာအမှားကွီး ကတော့ Sven ကို save ပွီးတော့မှ သတျကှငျးထဲ ပွနျချေါသှားတဲ့ Notail ရဲ့ လုပျရပျပါ ( Agent-N is real :v )။ 23:20 က ဖွဈရပျမှာ Wicked sick Sven သခေဲ့ပွီး Kunkka 600 ကြျော gold ရလိုကျပါတယျ။ OG ရဲ့ game tempo တျောတျောလေး ပွနျကသြှားပွီး FV ကို အခြိနျပို ပေးလိုကျတာ ပါပဲ။
33:30 မှာ Kunnka (67sec), FV (57sec) no buyback နှဈကောငျ ဂဏနျးငွိမျနပွေီ3းvs5(ageis ပါအပါ) ရမေီးအစုံနဲ့ လထေီးခုနျမယျ့ OG တှကေို suprise နဲ့အတူ Epicenter, Burrowstrike, Sand Strom နဲ့ ၀ငျပွီး Pugna, Dark Willow ကို အရသတျပေးလိုကျတာကတော့ YapzOr ပါ။ အဲ့ Batttle မှာ Ancient ရဲ့ Ice Blast ကို Puppey ကိုယျ့ရငျခှငျထဲကို ထညျ့လိုကျတာပါ၊ တဈယောကျမှကို မထိပါဘူး။ Big game changing တဈကှကျကတော့ YapzOr တဈယောကျတညျးနဲ့ တဈလောကလုံးကို ပွောငျးလဲလိုကျပွီး ရမေီးအစုံနဲ့ လထေီးခုနျမယျ့ ကောငျလေးတှေ God’s Strength, BKB မရှိလို့ နောကျပွနျဆုတျပေးလိုကျရတာပါပဲ။
အဲ့ဒါအပွီးမှာတော့ Lotus gaming နဲ့အတူ BKB မရှိတဲ့ အခြိနျတိုငျး Sven လုံးဝရူးသှပျနပွေီး Matu ရဲ့ BKB အပွီး နောကျပိုငျးသှားတဲ့ itemization တှရေယျ Mid game အလှနျက play တှရေယျကို OG တှေ ထိနျးခြုပျလို့ မရတော့ပါဘူး။ Secret က roshan နှဈခုပေးခဲ့သမြှ နောကျဆုံး roshan ကိုတော့ battle အနိုငျနဲ့ပါ အရယူနိုငျခဲ့ပွီး တဈလမျး Mega အရ ယူခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံး Battle ကတော့ လကျဖြားခါလောကျအောငျ Nisha+Matu ကောငျးလှနျးခဲ့ပွီး2vs5ပွနျယှဥျခခြဲ့တာပါ။ ( Underlord, AA no buyback )
SK buy back လုပျပွီး ပွနျ join တဲ့ ထို Battle က နှဈမိနဈစှနျးစှနျး ကွာခဲ့ပွီး 51:08 မှာ cool down ဖွဈနတေဲ့ BKB ရယျ power treads ရယျကို အောကျခပြွီး ရှိတဲ့ refresher shard အပျေါတငျ၊ Nisha က Cheese လာပေးတဲ့ movement လေးက တျောတျောလေး လှပကောငျးမှနျပွီး Midone မုနျးတဲ့ Time walk တှကေတော့ တျောတျောလေး လုပျပွနခေဲ့ပါတယျ။
အဆုံးသတျ တိုကျကှကျ ကိုတော့ ထုံးစံအတိုငျး YapzOr က Epicenter နဲ့အတူ no buy back Sven ကို သတျလိုကျတာပါ။ OG ရဲ့ အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျမှုနဲ့ အသာစီး ယူနိုငျမှုတှေ အားလုံးကို YapzOr အကွီးအကယျြ နှောကျယှကျ ဖကျြဆီးခဲ့ပွီး Game 1 ကို 53:19 မှာTeam Secret က Throne ကို ခြိုးကာ အရယူ နိုငျခဲ့ပါတယျ။
Game2မှာတော့ Puppey က IO ကို ban ကာ Tiny ကို လှတျပေးလိုကျပါတယျ။ OG ကလညျး pick ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပေးလိုကျရမှာဆိုးလို့ pick တဲ့ ပုံစံသာ ဖွဈနပွေီး Saksa Tiny ဆော့တာ မွငျတောငျ မမွငျဖူးပါဘူး။ သခြောတာက Topson ဆော့မယျ ဆိုတာပါပဲ။
နောကျတဈခုက Puppey ရဲ့ out-drafting တှပေါ။ pick တိုငျးက cover ပွီးသား counter ပွီးသားတှကွေီးပါ။ ပုံပါ ban list တှကေို ကွညျ့ရငျ second draft phase မှာ FV, MK, PA စတဲ့ carry hero တှခေညျြး ban ပွီး OG ဆော့တဲ့ Beastmaster လိုကောငျ pick မှာ စိုးတဲ့အတှကျ Chen ban အပွီးမှာ Enchantress ကို အရ pick ပါတယျ။ OG draft တှကေ Beastmaster မ pick ရဲတော့ဘဲ Tusk ထှကျလာကာ ပိုပိုလိမျသှားပွီး ဒုက်ခရောကျရပါတယျ။
OG က သခြောသာ Beastmaster လိုကောငျမြိုးနဲ့ map control ခငျြရငျ 11 (ban) မှာတညျးက Ench ကို ban သငျ့တာပါ။ နောကျပှဲမှာတော့ 11(ban) မှာ Ench နဲ့ 13(ban) မှာ Chen ကို ban ပါတယျ။ Puppey က ရိုးရိုးလေးပဲ 14(ban)ကို Beastmaster ကို ban လိုကျပါတယျ။ ဒါမွငျသာတဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ အရိုးရှငျးဆုံးလေးကို ပွောပွတာပါ။ ကြှနျတျောလိုလူ လိုကျမမီနိုငျတဲ့ လှညျ့ကှကျ၊ အတှေးအချေါနဲ့ အမွငျတှေ အမြားကွီး Puppey ဆီမှာ ရှိပါတယျ။ back to back TI champion တှတေောငျ outdrafting ဒဏျ ခံနရေတာပါ။ ပှဲကတော့ ပွောစရာ အမြားကွီး မရှိတော့ interview က ဟာလေးတှပေဲ ထပျကောကျနုတျခငျြပါတယျ။ Grand finals အပွီး Yapzor+Zai interview မှာ Sheever စဖှငျ့တဲ့ မေးခှနျးလေးက သိပျကောငျးပါတယျ။ အတိုခြုံးနဲ့ အထိရောကျဆုံး လောကျပဲ ပွောပါမယျ။
မေး။ ။ Zai ရေ မငျးတို့ finals တှေ အမြားကွီး လြောကျလှမျးလာတာ အဲ့လိုတှအေတှကျ မငျးတို့ draft တှကေို ဘယျလို ပွငျဆငျလဲ။
ဖွေ။ ။ ငါတို့က Ceb ရဲ့ dotabuff ကို ကွညျ့ခွငျးနဲ့ အစပွုပါတယျ (ရယျလကျြ)၊ စတာပါ၊ ငါ ထငျတာကတော့ တျောတျောမြားမြား draft ပွငျဆငျမှုတှကေ မငျး ဘယျလို ဆော့ရတာ သဘောကြ နှဈသကျလဲ ဆိုတာ အဖွရှောတာပါ။ ပွီးတော့ မငျးနဲ့ အံဝငျဂှငျကြ ဖွဈနမေယျ့ heroes တှကေို ဦးစားပေး သတျမှတျပွီး ဘယျလို match-ups တှကေ မငျးနဲ့ သကျတောငျ့သကျသာ အရှိဆုံးလဲ ဆိုတာ ရှာဖှရေပါတယျ။
မေး။ ။ ဥပမာ – OD ဆိုရငျရော အဲ့တာက မငျးတို့ ပွငျဆငျထားမှုရဲ့ အစိတျအပိုငျးထဲမှာ ပါတာပဲလား၊ ဒါမှမဟုတျ OD က game2အတှကျ အပွီးပွညျစုံဆုံး ဖွဈနတော သိသာထငျရှားနလေို့လား။
ဖွေ။ ။ အဲ့ဒါ ငါ့ မဟာဦးနှောကျကွီးက လာတဲ့ အကွံဉာဏျပဲ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ငါက အရမျးကောငျးတဲ့ OD Player မို့လို့၊ ပွီးတော့ OD က အဲ့ပှဲနဲ့ draft မှာ တကယျ့ တကယျကို ကောငျးမှနျတယျ၊ ပွီးတော့ အဲ့ဒါ တကယျကို အလုပျဖွဈခဲ့တယျလေ။
ပွောခငျြတာက Team Secret က second pick အားသာခကျြတိုငျးကို အသုံးခပြွီး ဘယျသူမှ မသုံးပမေယျ့ အဲ့ပှဲအတှကျ တကယျ့ အကောငျးဆုံးဖွဈတဲ့ OD pick ကို zai က suggest ပေးခဲ့တာပါ။ ပှဲထဲမှာကတော့ ရငျခုနျစရာ ဆိုလို့ Nisha က Haste rune ရှိတဲ့ 14:54 မှာ အယှလှနျပွီး Secret သုံးကောငျ သတေဲ့ဟာပဲ ရှိတာပါ။ ကနျြတဲ့ အခြိနျ တျောတျောမြားမြားက Secret လုပျနတော Secret သမနတောတှပေါပဲ။
တဈပှဲနဲ့ တဈပှဲက ပိုပိုပွတျသှားပွီး Secret ကောငျးကွောငျး ထပျကို မပွောခငျြပမေယျ့ ခုဒီ game နဲ့ ပတျသကျတာ ထပျပွောခငျြတာလေးက Matu ပါ။ Itemization တှေ အသငျးနဲ့အတူ တှဲဆော့မှုတှကေ ဘယျ carry player မဆို လလေ့ာအတုယူသငျ့ပါတယျ။ Armlet, Desolater, Nullifier နဲ့ Guardian Angel လညျး လာထား အေးဆေးလေးပါပဲ။
Arteezy လို လူမြိုးကတောငျ တလေးတစားနဲ့ သူကွညျ့ပွီး လလေ့ာသငျယူနတေဲ့သူက Matu ပါတဲ့။ Miracle ဟာ တဈခတျေမှာ တဈယောကျ ဆိုတဲ့ လူစားမြိုး ဖွဈပွီး အဖကျဖကျက ပွညျ့စုံတဲ့ ပါရမီရှငျပါ။ သူတှေးသလို၊ သူဆော့သလိုနဲ့ သူ map ရှသေ့လို ရှဖေို့က အရမျး ခကျခဲနကျနဲလှနျးပါတယျ။ လူငယျ carry တှကေို အကွံပေးခငျြတာက Matu တို့ Nikobaby တို့ကို မြားမြားကွညျ့ မြားမြား လလေ့ာသငျ့ပါတယျ။
ဂိမျးနံပါတျ ၂ ကတော့ 25:25 က Matu ရဲ့ Lifestealer Rampage ရပွီးတော့ Nisha ရဲ့ ပှဲသိမျး Ultra kills နဲ့ အတူပဲ နောကျဖေးပေါကျကနေ ခြောငျးကွညျ့ရုံ သကျသကျလုပျလာတဲ့ Buy back တှနေဲ့ OG တှေ 29 မိနဈမှာ GG ချေါလိုကျပါတော့တယျ။
အပျေါမှာ ပွောထားတာတှေ တျောတျောမြားမြားနဲ့တောငျ လုံလောကျနပွေီး Game3အတှကျက ပွောစရာ ဘာမှ မရှိသလောကျပါပဲ။ တဈပှဲနဲ့တဈပှဲ ပိုပိုခြိနဲ့သှားတဲ့ OG တှကေို ကွညျ့ရတာ တျောတျော အားမရစရာပါ။ Draft, Laning မှာတညျးက Team Secret နဲ့ ကမ်ဘာတှေ ခွားနခေဲ့ပါပွီ။
ဒီ Game က TI9Grand Finals က Game3ကို ပွနျပွောငျးအမှတျရစပေါတယျ။ အဖကျဖကျက ဘယျလိုမှ နာလနျမထူ နိုငျတဲ့နောကျတော့ OG တှဟော Gambling လုပျတဲ့ Do or Die Battle တှေ ဆကျတိုကျလုပျပွီး တောငျ့ခံဖို့ ဘယျလိုမှ မဖွဈတော့တဲ့ အဆုံး 22:22 မှာ GG ချေါလိုကျတဲ့နောကျ Finals ၇ ပှဲဆကျ 3:0 နဲ့အတူ ယခုလကျရှိ Team Secret ဟာ သမိုငျးတဈလြောကျ အကွီးအကယျြဆုံးနဲ့ အလှမျးမိုးဆုံး DOTA2အသငျး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
Final bosses တွေကိုဘယ်လိုမှ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်ဆက်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ (Omega League Grand Final Analysis)
ပွဲကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရမှာက Secret ဘယ်လောက်ထိကောင်းကြောင်း၊ ဘယ်သူမှ ဘယ်လိုမှ ယှဉ်မဆော့နိုင်လောက်တဲ့ အထိ အကွက်စေ့ကြောင်း၊ Puppeyဟာ DOTA သမိုင်းတစ်လျောက် ချွင်းချက်မရှိ အကောင်းဆုံး Drafter တစ်ယောက်သာမက Captainကောင်း Leaderကောင်းဖြစ်ကြောင်း ဒါတွေပဲ ထပ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ပျင်းစရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး ဒီနှစ်ရဲ့ မရိုးတဲ့ ပုံပြင်ဟောင်းလေးအတိုင်း Team Secret အတွက် 3:0 ဇာတ်လမ်းလေး နောက်တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ အဲ့တော့ ဒီနှစ်သင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တစ်ခြား ထွေရာလေးပါးတွေကို နည်းနည်းပိုပြီး အသားပေးပြောချင်ပါတယ်။
Secret နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်တွေပါ ပြောမှာဖြစ်တော့ အရင်ဆုံး OG တွေ မလုံလောက်သေးတဲ့အကြောင်း OGတွေ OG မပီသတဲ့ အကြောင်းကနေ စလိုက်ရအောင်။
ဒါပေမယ့် OGတွေ မလုံလောက်သေးဘူး ဆိုတာက မကောင်းတာလား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူးရယ်။ OGရဲ့ map movement နဲ့ map control တွေက Secret ထက် နည်းနည်းလေးမှကို မနိမ့်ပါဘူး။ တစ်ခြားအသင်းက ကစားသမားတွေလို (ဝှီးလို :3) ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့ သေခြင်းတွေ map awareness မရှိတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ တော်တော်လေးမြင်ရခဲပါတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း ကြိုက်တဲ့အသင်းလာ OG ကရယ်ဒီပါပဲ။ (Team Secret ကလွဲလို့ :v)
အရင်ဆုံး TI 8, TI9OG အပြီး နောက်ဆုံး Sumail အလွန်ကာလကို တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရင် Midone မှာ carry စိတ်ခံ မရှိသေး ready မဖြစ်သေးပါဘူး။ Sven ရော Faceless Void ရော Troll Warlord ရောကို ဘာ Basic items တစ်ကွက်မှ မပါဘဲ ဆော့တာကို ကြည့်ရတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမနေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သင်ယူရင် လေ့လာရင် အချိန်ယူရင် ပိုကောင်း ပို carry နိုင်မယ့် Midone ကို တွေ့ရမှာပါ။ လောလောဆယ် ဒါက ပြသနာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ မြင်ပါသေးတယ်။ Midoneဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။
OG မှာလိုနေတဲ့ တကယ့်နေရာအမှန်က Position4ပါ။ Jerax အနားယူပြီးနောက် ကမ္ဘာ့အဆင့် Pos4တွေကို စီလိုက်ရင် Gh, Cr1t, Yapzor, fy တို့ပါ။ အကုန်လုံးက playermaker role ကို အကောင်းဆုံး ဆော့နိုင်ကြပြီး Cr1tကတော့ defensive စိတ်အခံနဲ့ အချိန်ကောင်း အရမ်းစောင့်ကာ ဆော့တာ နည်းနည်းလေးပါတယ်။
အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက Saksa ပါပဲ။ ဆော့ပုံလေးတာက Cr1t အဖေခေါ်ရလောက်အောင် လေးပါတယ်။ Playmaker ကောင်း တစ်ယောက်လား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ Heroes Pool ကျယ်လား ဆိုတော့လည်း မကျယ်ပါဘူး။ Signature Heroes တွေ ကောင်းကောင်းရှိလား ဆိုတော့လည်း မယ်မယ်ရရ ချပြစရာ မရှိပါဘူး။ OG fans စစ်စစ်တွေဆို တော်တော် အသည်းပေါက်လောက်စရာက OG က Tiny pick ရင် သေချာတာက Topson ဆော့မယ်ဆိုတာပါပဲ။ Jerax ကို လွမ်းဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ OG လည်းမရ ရတဲ့ထဲက အကောင်းဆုံးကိုခေါ်ထားတာပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာလည်း တကယ်ကောင်းသေးတဲ့ pos4ဆိုလို့ Europe မှာ Taiga, Zayac တို့လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်(အကုန်လုံးက အသင်းကိုယ်စီနဲ့) OG ဟာ TI မှာ အသစ်ဆုံးသော အဆန်းဆုံးသော အလှဆုံးသောအရာကို တီထွင်ချပြခဲ့တာပါ။
အခု OG ရဲ့ Secret ကို draft နိမ့်ခြင်း၊ heroes တွေကို role flexibility လုပ်ရခက်နေခြင်း၊ Topson အတော်လေး ဆော့ရခက်နေခြင်းဟာ Saksaနဲ့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များများ ဆိုင်ပါတယ်။ အခုဒီ အခြေအနေနဲ့ Team Secret ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ နိုင်အောင်ဆော့နိုင်တဲ့အသင်း လက်ငါးချောင်း မပြည့်ပါဘူး။ အဲ့ထဲမှာ OG နဲ့ Nigma က ထိပ်ဆုံးက ပါနေမှာပါ။ OG ကလည်း Saksa နေရာ ၊ Nigma ကလည်း W33 နေရာ အဖြေရှာတွေ့ရင်ပေါ့လေ။ (လူလဲချင်းမဟုတ်တဲ့ အဖြေထုတ်နိုင်ကြမလား???) သေချာတာတော့ Notail တစ်ယောက် Ana လေးနဲ့ Jerax ကြီးကို လွမ်းနေမယ်ဆိုတာ သူ့မျက်နှာမြင်လိုက်တဲ့သူတွေ သိကြမှာပါ။
နည်းနည်းလောက် အသက်၀၀ရှူလိုက်ပြီးမှ ဆက်ဖတ်လိုက်ပါ မိတ်ဆွေ၊ အခု သမိုင်းတစ်လျောက် အကောင်းဆုံးရလဒ် တွေနဲ့ လွှမ်းမိုးထားတဲ့ အသင်း အကြောင်း ဖတ်ရမှာပါ။
Covid သာ မနှောက်ခဲ့ရင်လို့ တွေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ Secretဟာ ဘာလဲ ဘယ်လဲပေါ့။ Puppeyကြီး လေးကြိမ်မြောက် TI Grand Finals ကိုသာ ဆော့ရရင် ရှုံးရှုံး နိုင်နိုင်ဗျာ အနည်းဆုံးတော့ Godfather ကြီးရဲ့ insight အကျဆုံး အတွေးအခေါ်တွေ၊ တစ်သင်းလုံးကို ဦးဆောင်ပုံတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်းလေး မြင်နိုင်တာပေါ့။
ဘော်ဒါအစ်ကိုတစ်ယောက်ကပြောလာတော့မှ ကျွန်တော်လည်း True Sightမှာ Puppey ကြီးကို အမြင်ချင်ဆုံးပဲ ဆိုတာ သတိဝင်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ Team Secretဆိုတာဘယ်တုန်းက TIနဲ့ လမိုင်းကပ်ခဲ့လို့လဲ။ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အမြဲတမ်း အခင်ဆုံးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင် ပြုတ်နေကြပဲ မဟုတ်လား။ ထားလိုက်ပါတော့ ဒါတွေကို။
ပစ္စုပန်ကိုပြန်သွားလိုက်ကြရအောင်။ Ceb ရဲ့ Grand finals မတိုင်ခင် tweet က time to play final boss again ပါ။ Secret ဟာ နောက်ဆုံးဆရာကြီးတွေပါ။ ဒီ grand finals ရဲ့ 3:0 မတိုင်ခင် ၆ ပွဲဆက်တိုက် ဖိုင်နယ်တွေမှာ 3:0 ယူလာတဲ့ အသင်းပါ။ သမိုင်းတစ်လျောက် ဘယ်သူမှမရှိသေးပါဘူး။ OG ကတော့ Sumail ရှိတုန်းက ping များနေတဲ့ Midone နဲ့တစ်ခါ၊ အခု Ceb ပြန်လာတဲ့တစ်ခါ နှစ်ခါလုံး အရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
OMEGA League ရဲ့ upper bracket final ပွဲအပြီး Panel မှာ BSJ က Secret ဟာ ပျင်းဖို့ကောင်းလောက်အောင် ကောင်းလွန်းနေပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ laning stage အပြီးလောက်ဆိုရင်ကို ပွဲက အဖြေထွက် နေလို့ပါပဲ။ Puppey draft တွေကလည်း နည်းနည်းမှကို မနိမ့်ခဲ့ဘူးလေ။ ဘယ်သူမှ ယှဉ်လို့မရတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရလွယ်ပြီး အကောင်ပေါင်းစုံ ဆော့နေနိုင်တဲ့ အခု အသင်းသားတွေကို ရထားတာလည်း တစ်ကြောင်းပေါ့။
နောက်ပြီးဆော့တာကလည်း တကယ်ကောင်းတဲ့ discipline တွေနဲ့ အပိုအလိုမရှိ ဆော့နိုင်နေတာပါ။ Matu ဟာ hard carry ကောင်းကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ big game player ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အကြိမ်ကြိမ် သက်သေ ပြနေပါတယ်။ တစ်ခြားသူတွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း Team Secret ဘယ်လိုလုပ်ကြောင်းကတော့ ဆက်မပြောတော့ပါဘူး။ ဟိုးအပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဖတ်ရတာ ပျင်းတယ်ကွာပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ Grand finals အပြီး Yapzor + Zai interview မှာလည်း Zai က finals တွေတိုင်းက 3:0 တွေဆိုပေမယ့် အတတ်နိုင်ဆုံး စိတ်ဝင်စရာကောင်းအောင် ဆော့နေပါတယ်တဲ့။
ဘယ်လောက်ပျင်းဖို့ကောင်းတဲ့စကားမျိုးလဲ။ ဪ … ဒါနဲ့ Team Secret ရဲ့ 2020 တစ်လျောက် ဆော့ကစားထားပြီး အနိုင်ရတဲ့ Winrate က 81.97% တဲ့ဗျို့။
ကဲ 3-0 နဲ့ Game ပွဲသုံးပွဲဘက်လှည့်လိုက်ရအောင်။ Coin toss တိုင်းဟာ OG နိုင်ပြီး first pick ယူပါတယ်။ သုံးပွဲလုံး first pick, dire ပါ။
Draft ကနေ စရရင် OG ဟာ အနည်းဆုံးတော့ အိမ်စာလုပ်လာတယ် ပြင်ဆင်လာတယ်ဆို တာကို တွေ့ရမှာပါ။
Magnus, Tiny, Phoenix, Clockwerk တို့ကို ban list တင်အပြီးမှာ IO first pick နဲ့ စထွက်လာတဲ့ OG ကို အများကြီး စဉ်းစား မနေတော့ဘဲ Ancient Apparition ကြီး Puppey ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ Dark Willow ကတော့ ထင်မှတ်မထားတဲ့ တစ်ပွဲတိုးအကွက်နဲ့ Saksa အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ကောင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Team Secret ရဲ့ second pick ဟာ Faceless Void ပါ။
ဒါနဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေ အတွက် ရယ်စရာလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ Nigma ကို 2:0 နဲ့ နိုင်အပြီးမှာ Midone နဲ့ အင်တာဗျူးပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာ Lacoste က panel ကနေ ဟေး, Midone မင်းက တွစ်တာမှာ IceFrog ဟိုဟာက broken ဖြစ်တယ်၊ ဒီဟာက broken ဖြစ်တယ်နဲ့ အမြဲ tweet တာ ငါအရမ်းကြိုက်တယ်။ အခုနေ tweet ရမယ်ဆို မင်း ဘာ tweet မလဲ မေးတော့ Midone က IceFrog ဆိုပြီး ငါ tweet မယ် “မင်းရဲ့ f**king Faceless Void က ဆိုပြီး အရင်ဆုံးစမယ်၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အဲ့ကောင်က အဆင်ပြေမနေဘူး၊ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် သူ့ရဲ့ ပထမ spell က အခြေခံအားဖြင့်တော့ အဲ့တာ Weaver ရဲ့ ultimate ကြီး၊ သူ အဲ့တာကိုသုံးတဲ့ အကြိမ်တိုင်း ငါဒေါသထွက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ bash (time lock), ငါထင်တယ် အဲ့တာကလည်း တကယ်အဆင်မပြေဘူး။
အဲ့တာက bash ၀င်သွားတဲ့ အကြိမ်တိုင်းက double damage လိုပဲ၊ ငါကတော့ IceFrog ဘာတွေ တွေးနေလဲ မသိဘူး၊ ငါပြောနိုင်တာကတော့ သူရဲ့ ဦးနှောက်က ပြသနာတစ်ခု ဆိုတာပဲ ၊ Time Dilation ကလည်း နောက်ထပ် အဆင်ပြေတဲ့ spell တစ်ခုမဟုတ်ပြန်ဘူး။” ဆိုပြီး ဒေါနဲ့မောနဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ Midone တစ်ယောက် သူမုန်းနေတဲ့ကောင်နဲ့ နဖူးတွေ့၊ ဒူးတွေ့ စတွေ့ပါပြီ။
Second pick phase မှာ Team Secret က Sand King ထွက်လာပြီးနောက် SK, AA ဆိုတဲ့ backline ကို ဝင်ရှင်းဖို့ Vision အားသာချက်ကို AOE silence ရောပါတဲ့ NS ကို ထပ်ထုတ်လာတာ reasonal pick ဆိုပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း Playmaker ပျောက်နေသေးပြီး hero တွေ အကုန် pick အပြီးမှာတော့ pugna ဟာ Topson ရဲ့ mid ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြောရရင် ထုံးစံအတိုင်း Team Secret ရဲ့ pick power ဟာ mid game နဲ့ late game တော်တော်လေး အားကောင်းနေပြီး အစောပိုင်း objectives တွေ အတွက်သာ စိုးရိမ်စရာ ရှိတာပါ။
ပွဲထဲ ရောက်တော့လည်း laning phase အစမှာတည်းက Secret တွေ ရှယ်လုပ်ပါတယ်။ ဘယ်လမ်းမှ pressure မရှိပါဘူး။ lane တွေ ဆော့တာကလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ heroes kills တွေပါ အရယူနိုင်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ OG လည်း laning မှာ ဘာ pressure မှ အဲ့လောက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ Laning အပြီးမှာတော့ Great Cleave နဲ့ free farm ရနေတဲ့ Sven က OG ရဲ့ networth တွေ တော်တော်လေး ခေါင်းထောင်နေရခြင်း အကြောင်းအရင်းပါပဲ။
Midone ရဲ့ itemization တွေကလည်း တော်တော်လေး ပေပါတယ်။ အထက်မှာ ပြောတဲ့အတိုင်း သုံးပွဲလုံး Bracer၊ Wraith band တစ်ခုမှ ထည့်မသွားပါဘူး။ Sven ကိုလည်း Phase Boots, Magic Wands, Mask of Madness, Echo Sabre နဲ့ Black King Bar ရယ်ပါ။ over farm ဖြစ်နေပြီး 20 minutes over 13000 ဆိုတဲ့ networth ကြောင့်ရယ် IO ကြောင့်ရယ် အသက်ရှူချောင်နေတာပါ။ တစ်ဖက်က crowd control တွေ တအားများတော့ BKB နဲ့ God’s strength မရှိတဲ့ အချိန်တိုင်းက ငရဲပါပဲ။ BKB 5sec လောက် အရောက်ဆို တော်တော်လေး ဒုက္ခရောက်နေခဲ့တာပါ။
တစ်ဖက်မှာလည်း Matu က ဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပါ။ Mid Game လောက်ထိ Midone ထက် အမှားပိုများပြီး farm ရတာလည်း ပိုကြာပါတယ်။ Mask of Madness အပြီးမှာလည်း နောက်ထပ် farm တာ Black King Bar ပါ။ အသင်းက battle heroes တွေ များတော့ သူကိုယ်လည်း space ပြန်ချုံ့ပြီး တော်တော်လေး Battle တွေကို follow လုပ်ပါတယ်။ OG တွေ ကလည်း Roshan battles တွေကို အကောင်းဆုံးဆိုင်ပြီး Map ကို အကောင်းဆုံး control လုပ်ထားတာပါ။
ပွဲရဲ့ Draft ကတော့ ကြာကြာဆော့လေလေ Secret က ကြိုက်လေလေဆိုတော့ points တွေပဲ ဆွဲထုတ်ပြပါတော့မယ်။ OG ရဲ့ မဟာအမှားကြီး ကတော့ Sven ကို save ပြီးတော့မှ သတ်ကွင်းထဲ ပြန်ခေါ်သွားတဲ့ Notail ရဲ့ လုပ်ရပ်ပါ ( Agent-N is real :v )။ 23:20 က ဖြစ်ရပ်မှာ Wicked sick Sven သေခဲ့ပြီး Kunkka 600 ကျော် gold ရလိုက်ပါတယ်။ OG ရဲ့ game tempo တော်တော်လေး ပြန်ကျသွားပြီး FV ကို အချိန်ပို ပေးလိုက်တာ ပါပဲ။
33:30 မှာ Kunnka (67sec), FV (57sec) no buyback နှစ်ကောင် ဂဏန်းငြိမ်နေပြီ3းvs5(ageis ပါအပါ) ရေမီးအစုံနဲ့ လေထီးခုန်မယ့် OG တွေကို suprise နဲ့အတူ Epicenter, Burrowstrike, Sand Strom နဲ့ ၀င်ပြီး Pugna, Dark Willow ကို အရသတ်ပေးလိုက်တာကတော့ YapzOr ပါ။ အဲ့ Batttle မှာ Ancient ရဲ့ Ice Blast ကို Puppey ကိုယ့်ရင်ခွင်ထဲကို ထည့်လိုက်တာပါ၊ တစ်ယောက်မှကို မထိပါဘူး။ Big game changing တစ်ကွက်ကတော့ YapzOr တစ်ယောက်တည်းနဲ့ တစ်လောကလုံးကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး ရေမီးအစုံနဲ့ လေထီးခုန်မယ့် ကောင်လေးတွေ God’s Strength, BKB မရှိလို့ နောက်ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာပါပဲ။
အဲ့ဒါအပြီးမှာတော့ Lotus gaming နဲ့အတူ BKB မရှိတဲ့ အချိန်တိုင်း Sven လုံးဝရူးသွပ်နေပြီး Matu ရဲ့ BKB အပြီး နောက်ပိုင်းသွားတဲ့ itemization တွေရယ် Mid game အလွန်က play တွေရယ်ကို OG တွေ ထိန်းချုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ Secret က roshan နှစ်ခုပေးခဲ့သမျှ နောက်ဆုံး roshan ကိုတော့ battle အနိုင်နဲ့ပါ အရယူနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်လမ်း Mega အရ ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Battle ကတော့ လက်ဖျားခါလောက်အောင် Nisha+Matu ကောင်းလွန်းခဲ့ပြီး2vs5ပြန်ယှဉ်ချခဲ့တာပါ။ ( Underlord, AA no buyback )
SK buy back လုပ်ပြီး ပြန် join တဲ့ ထို Battle က နှစ်မိနစ်စွန်းစွန်း ကြာခဲ့ပြီး 51:08 မှာ cool down ဖြစ်နေတဲ့ BKB ရယ် power treads ရယ်ကို အောက်ချပြီး ရှိတဲ့ refresher shard အပေါ်တင်၊ Nisha က Cheese လာပေးတဲ့ movement လေးက တော်တော်လေး လှပကောင်းမွန်ပြီး Midone မုန်းတဲ့ Time walk တွေကတော့ တော်တော်လေး လုပ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။
အဆုံးသတ် တိုက်ကွက် ကိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း YapzOr က Epicenter နဲ့အတူ no buy back Sven ကို သတ်လိုက်တာပါ။ OG ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်မှုနဲ့ အသာစီး ယူနိုင်မှုတွေ အားလုံးကို YapzOr အကြီးအကျယ် နှောက်ယှက် ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး Game 1 ကို 53:19 မှာTeam Secret က Throne ကို ချိုးကာ အရယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Game2မှာတော့ Puppey က IO ကို ban ကာ Tiny ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ OG ကလည်း pick ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပေးလိုက်ရမှာဆိုးလို့ pick တဲ့ ပုံစံသာ ဖြစ်နေပြီး Saksa Tiny ဆော့တာ မြင်တောင် မမြင်ဖူးပါဘူး။ သေချာတာက Topson ဆော့မယ် ဆိုတာပါပဲ။
နောက်တစ်ခုက Puppey ရဲ့ out-drafting တွေပါ။ pick တိုင်းက cover ပြီးသား counter ပြီးသားတွေကြီးပါ။ ပုံပါ ban list တွေကို ကြည့်ရင် second draft phase မှာ FV, MK, PA စတဲ့ carry hero တွေချည်း ban ပြီး OG ဆော့တဲ့ Beastmaster လိုကောင် pick မှာ စိုးတဲ့အတွက် Chen ban အပြီးမှာ Enchantress ကို အရ pick ပါတယ်။ OG draft တွေက Beastmaster မ pick ရဲတော့ဘဲ Tusk ထွက်လာကာ ပိုပိုလိမ်သွားပြီး ဒုက္ခရောက်ရပါတယ်။
OG က သေချာသာ Beastmaster လိုကောင်မျိုးနဲ့ map control ချင်ရင် 11 (ban) မှာတည်းက Ench ကို ban သင့်တာပါ။ နောက်ပွဲမှာတော့ 11(ban) မှာ Ench နဲ့ 13(ban) မှာ Chen ကို ban ပါတယ်။ Puppey က ရိုးရိုးလေးပဲ 14(ban)ကို Beastmaster ကို ban လိုက်ပါတယ်။ ဒါမြင်သာတဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးလေးကို ပြောပြတာပါ။ ကျွန်တော်လိုလူ လိုက်မမီနိုင်တဲ့ လှည့်ကွက်၊ အတွေးအခေါ်နဲ့ အမြင်တွေ အများကြီး Puppey ဆီမှာ ရှိပါတယ်။ back to back TI champion တွေတောင် outdrafting ဒဏ် ခံနေရတာပါ။ ပွဲကတော့ ပြောစရာ အများကြီး မရှိတော့ interview က ဟာလေးတွေပဲ ထပ်ကောက်နုတ်ချင်ပါတယ်။ Grand finals အပြီး Yapzor+Zai interview မှာ Sheever စဖွင့်တဲ့ မေးခွန်းလေးက သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အတိုချုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး လောက်ပဲ ပြောပါမယ်။
မေး။ ။ Zai ရေ မင်းတို့ finals တွေ အများကြီး လျောက်လှမ်းလာတာ အဲ့လိုတွေအတွက် မင်းတို့ draft တွေကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ငါတို့က Ceb ရဲ့ dotabuff ကို ကြည့်ခြင်းနဲ့ အစပြုပါတယ် (ရယ်လျက်)၊ စတာပါ၊ ငါ ထင်တာကတော့ တော်တော်များများ draft ပြင်ဆင်မှုတွေက မင်း ဘယ်လို ဆော့ရတာ သဘောကျ နှစ်သက်လဲ ဆိုတာ အဖြေရှာတာပါ။ ပြီးတော့ မင်းနဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်နေမယ့် heroes တွေကို ဦးစားပေး သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်လို match-ups တွေက မင်းနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အရှိဆုံးလဲ ဆိုတာ ရှာဖွေရပါတယ်။
မေး။ ။ ဥပမာ – OD ဆိုရင်ရော အဲ့တာက မင်းတို့ ပြင်ဆင်ထားမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းထဲမှာ ပါတာပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ် OD က game2အတွက် အပြီးပြည်စုံဆုံး ဖြစ်နေတာ သိသာထင်ရှားနေလို့လား။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒါ ငါ့ မဟာဦးနှောက်ကြီးက လာတဲ့ အကြံဉာဏ်ပဲ၊ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ငါက အရမ်းကောင်းတဲ့ OD Player မို့လို့၊ ပြီးတော့ OD က အဲ့ပွဲနဲ့ draft မှာ တကယ့် တကယ်ကို ကောင်းမွန်တယ်၊ ပြီးတော့ အဲ့ဒါ တကယ်ကို အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။
ပြောချင်တာက Team Secret က second pick အားသာချက်တိုင်းကို အသုံးချပြီး ဘယ်သူမှ မသုံးပေမယ့် အဲ့ပွဲအတွက် တကယ့် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ OD pick ကို zai က suggest ပေးခဲ့တာပါ။ ပွဲထဲမှာကတော့ ရင်ခုန်စရာ ဆိုလို့ Nisha က Haste rune ရှိတဲ့ 14:54 မှာ အယွလွန်ပြီး Secret သုံးကောင် သေတဲ့ဟာပဲ ရှိတာပါ။ ကျန်တဲ့ အချိန် တော်တော်များများက Secret လုပ်နေတာ Secret သမနေတာတွေပါပဲ။
တစ်ပွဲနဲ့ တစ်ပွဲက ပိုပိုပြတ်သွားပြီး Secret ကောင်းကြောင်း ထပ်ကို မပြောချင်ပေမယ့် ခုဒီ game နဲ့ ပတ်သက်တာ ထပ်ပြောချင်တာလေးက Matu ပါ။ Itemization တွေ အသင်းနဲ့အတူ တွဲဆော့မှုတွေက ဘယ် carry player မဆို လေ့လာအတုယူသင့်ပါတယ်။ Armlet, Desolater, Nullifier နဲ့ Guardian Angel လည်း လာထား အေးဆေးလေးပါပဲ။
Arteezy လို လူမျိုးကတောင် တလေးတစားနဲ့ သူကြည့်ပြီး လေ့လာသင်ယူနေတဲ့သူက Matu ပါတဲ့။ Miracle ဟာ တစ်ခေတ်မှာ တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ လူစားမျိုး ဖြစ်ပြီး အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံတဲ့ ပါရမီရှင်ပါ။ သူတွေးသလို၊ သူဆော့သလိုနဲ့ သူ map ရွေ့သလို ရွေ့ဖို့က အရမ်း ခက်ခဲနက်နဲလွန်းပါတယ်။ လူငယ် carry တွေကို အကြံပေးချင်တာက Matu တို့ Nikobaby တို့ကို များများကြည့် များများ လေ့လာသင့်ပါတယ်။
ဂိမ်းနံပါတ် ၂ ကတော့ 25:25 က Matu ရဲ့ Lifestealer Rampage ရပြီးတော့ Nisha ရဲ့ ပွဲသိမ်း Ultra kills နဲ့ အတူပဲ နောက်ဖေးပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်ရုံ သက်သက်လုပ်လာတဲ့ Buy back တွေနဲ့ OG တွေ 29 မိနစ်မှာ GG ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အပေါ်မှာ ပြောထားတာတွေ တော်တော်များများနဲ့တောင် လုံလောက်နေပြီး Game3အတွက်က ပြောစရာ ဘာမှ မရှိသလောက်ပါပဲ။ တစ်ပွဲနဲ့တစ်ပွဲ ပိုပိုချိနဲ့သွားတဲ့ OG တွေကို ကြည့်ရတာ တော်တော် အားမရစရာပါ။ Draft, Laning မှာတည်းက Team Secret နဲ့ ကမ္ဘာတွေ ခြားနေခဲ့ပါပြီ။
ဒီ Game က TI9Grand Finals က Game3ကို ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရစေပါတယ်။ အဖက်ဖက်က ဘယ်လိုမှ နာလန်မထူ နိုင်တဲ့နောက်တော့ OG တွေဟာ Gambling လုပ်တဲ့ Do or Die Battle တွေ ဆက်တိုက်လုပ်ပြီး တောင့်ခံဖို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်တော့တဲ့ အဆုံး 22:22 မှာ GG ခေါ်လိုက်တဲ့နောက် Finals ၇ ပွဲဆက် 3:0 နဲ့အတူ ယခုလက်ရှိ Team Secret ဟာ သမိုင်းတစ်လျောက် အကြီးအကျယ်ဆုံးနဲ့ အလွှမ်းမိုးဆုံး DOTA2အသင်း ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။